The Oppo Reno 2 pụtara pụtara gbaara ya ihe oyiyi na teknuzu nkọwa | Gam akporosis
The Oppo Reno 2 pụtara pụtara gbaara ya ihe oyiyi na teknuzu nkọwa
N'oge na-adịbeghị anya Oppo Reno 2 batara n'ime nchekwa data TENAA dị ka ọkara nke dara ngwụrọ. A ga-enye ngwaọrụ a atọ ụdị dị iche iche, dika ekpughere ya ubochi ole na ole gara aga. Ke adianade do, ọ na-ama nwere ụbọchị ntọhapụ, nke gafere otu izu.
Agencylọ ọrụ asambodo ndị China TENAA nwere emelitere ndepụta nke njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ngwaọrụ a, nke yiri ka ọ bụ isi ihe atụ, yana ihe onyonyo ya, yabụ ugbu a, anyị nwere ike nweta echiche doro anya na nke doro anya nke ihe onye nrụpụta ahụ echere anyị na ụdị a.
A ga-agbado usoro Oppo Reno 2 na ngalaba foto, dị ka ihe ụlọ ọrụ ahụ na-ekpughe na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya. TENAA na-agwa anyị na Reno 2 ga-abịa na-eji usoro igwefoto quad n'azụ ga-abịarute ya na ihe mmetụta 48 MP bụ isi na 13 MP MP na lens 2X anya, ihe mmetụta 8 MP na ihe omimi dị omimi. 2 MP. Banyere igwefoto dị n'ihu, a ga - enwe onye na - agba egbe 16-megapixel. Ihe onyonyo ndị anyị kowere n'okpuru nwere ike ikwenye ọnọdụ nke igwefoto igwefoto a.
El ufọt ufọt nwetara nkwado na ihe nhazi octa-core 2.2GHz, Ram nke 8 GB nke Ram na 128 GB ma ọ bụ 256 GB nke nchekwa - gbasaa site na microSD kaadị ruo 256 GB-. Ihuenyo ọ kwadebere bụ sentimita 6.5 na mkpebi ya bụ FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ (20: 9).
OPPO Reno2 nwere 5G amalitelarị
OPPO Reno 2 mekwara ka o doo anya na ọ na-agba ọsọ gam akporo 9, yana ịnwe ihe nyocha akara ngosi na batrị 3,915 mAh n'okpuru mkpuchi. Ndepụta TENAA na-ekwu na ọ ga-adị na oji, pink, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Enyere akụkụ ya dịka 160 x 74,3 x 9,5 millimeters na ịdị arọ ya bụ gram 189.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Oppo Reno 2 pụtara pụtara gbaara ya ihe oyiyi na teknuzu nkọwa
Foto Google ga-acha foto ochie na oji na ọcha
Ihe ngosi Redmi 7 gafere nde 20